“ခမျြးသာခငျြရငျ ငှမေစုပါနှဲ့ (ခမျြးသာခငျြသူတိုငျး ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျပါ)” - Barnyar Barnyar
ခမျြးသာခငျြရငျ ငှမေစုပါနှဲ့ (ခမျြးသာခငျြသူတိုငျး ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျပါ)
ပိုကျဆံစုရငျ ခမျြးသာမယျဆိုတဲ့ အယူအဆကိုတော့ ကနြျော ပွတျပွတျသားသား ဆနျ့ကငျြပါတယျ
ပိုကျဆံကို ကွိုးစားပမျးစားရှာ ရှာပီးတာနဲ့ အသအေလဲစု ဘဏျမှာပဲစုစု လကျထဲမှာပဲစုစု အခြိနျတနျ အဲ့စုထားတဲ့ငှတေနျဖိုးက လြော့ကလြာမှာပါ ကုနျဈေးနှုနျးတှကေလဲ မွငျ့တကျလာနအေုံးမှာပဲ မိတျဆှေ ငယျငယျက ငှေ ၁သောငျးဟာ သိပျတနျဖိုးကွီးပါတယျ
ခုခြိနျမှာတော့ ငှေ ၁သောငျးဟာ ဘာမှမပွောပလောကျတဲ့ အနအေထားဖွဈနပေါပွီ ကနြျောတို့ ငယျငယျတုံးက ဇီးထုပျတထုပျမှ ၁ကပျြ ငှေ ၁၀ရှိရငျ ဗိုကျကားအောငျ စားလို့ရတဲ့အထိ အဖိုးတနျခဲ့တဲ့ ၁၀တနျဟာလဲ ခုဆို ဘယျသူမှ မယူတော့တဲ့ပိုကျဆံ ဖွဈနပေါပွီ သီလရှငျကိုတောငျ လောငျးလို့မရတော့ပါဘူး တနျဖိုးတှလေဲ လြော့ကသြှားပါပွီ
မိတျဆှတေို့ ကလေးနောငျရေးအတှကျ ဘဏျမှာ တလ ၃သောငျးစီဖွဈဖွဈ ပုံမှနျစုထားတဲ့ ငှဟောလညျး တခြိနျ ငှကွေေးဖောငျးပှလာမှု ကုနျဈေးနှုနျး မွငျ့တကျလာမှုတှရေဲ့ မိုးကွိုးပဈမှုကို ဘဏျမှာစုတာ အတိုးရတယျကှဆိုတဲ့ ထနျးလကျသေးသေးလေးနဲ့ ကာနိုငျမယျ ထငျပါသလား?
အမှနျတကယျက ခမျြးသာခငျြရငျ ပိုကျဆံကို သုံးရမှာပါ ငှကေို အသမေထားပဲ ငှနေဲ့ ငှေ မိတျဆှေ ဖှဲ့ခိုငျးရပါလိမျ့မယျ ဒါမှသာ တိုးပှားမှု ရှိလာနိုငျမှာပါ ပိုကျဆံသုံးတဲ့ နရောမှာ ဦးနှောကျလေးပါ တှဲသုံးရငျ ပိုမွနျဆနျပါလိမျ့မယျ
ဥပမာတဈခုအနနေဲ့ ပွောရရငျ အဝတျအစားတှဝေယျဖို့ ပိုကျဆံသုံးလိုကျတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ သူခမျြးသာဖို့အတှကျ သုံးတာပါ
၂.လကျကားဝယျဖို့ သုံးတာလား? ဘယျလိုပဲ သုံးသုံးပါ
၁. လကျလီဝယျဖို့ သုံးမယျဆိုရငျ လိုခငျြတာလေးတှရေလို့ စိတျခမျြးသာပါမယျ (ဖွုနျးတယျလို့ မပွောလိုပါဘူး အနညျးဆုံးတော့ လိုခငျြတာရရငျ စိတျခမျြးသာတတျကွသညျ မဟုတျလား)
၂. လကျကားဝယျဖို့ သုံးမယျဆိုရငျ ဖောကျသညျပေးလို့ ရသလို ကိုယျတိုငျလညျး လကျလီလကျကား ပွနျရောငျးနိုငျလို့ လူခမျြးသာပါမယျ
(ဒီလို ငှသေုံးခွငျးကတော့ ဦးနှောကျလေးပါ တှဲသုံးတာမြိုးပါ) သခြောပါတယျ ငှသေုံးခွငျးကသာ ကနြျောတို့ကို ခမျြးသာမှုတှေ ပေးတတျတာပါ ကိုယျရောစိတျရော တခုမဟုတျတခုကို ခမျြးသာစတောပါပဲ
သူဌေးတှကေိုကွညျ့လိုကျပါ သူတို့တှရေဲ့ဝငျငှတှေဟော ငှသေုံးခွငျးကနေ စီးဝငျနတောပါ မြားမြားသုံးလေ မြားမြားဝငျလပေါပဲ ဒီလုပျငနျးတခုပွီး နောကျလုပျငနျးတဈခု စသဖွငျ့ ထပျကာထပျကာ ငှကေို သုံးသုံးသှားကွတာပါ
ကဲဒီတော့ နောငျ ၁၀နှဈမှာ ဖွဈလာနိုငျတာတှကေို ကွိုတှေးပွီး ငှကေို စုမလား သုံးမလား ဆုံးဖွတျကွပေါ့ဗြာ လူတိုငျး ကွီးပှားခမျြးသာနိုငျကွပါစေ။
ချမ်းသာချင်ရင် ငွေမစုပါနှဲ့ (ချမ်းသာချင်သူတိုင်း ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ)
ပိုက်ဆံစုရင် ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုတော့ ကျနော် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပါတယ်
ပိုက်ဆံကို ကြိုးစားပမ်းစားရှာ ရှာပီးတာနဲ့ အသေအလဲစု ဘဏ်မှာပဲစုစု လက်ထဲမှာပဲစုစု အချိန်တန် အဲ့စုထားတဲ့ငွေတန်ဖိုးက လျော့ကျလာမှာပါ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလဲ မြင့်တက်လာနေအုံးမှာပဲ မိတ်ဆွေ ငယ်ငယ်က ငွေ ၁သောင်းဟာ သိပ်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်
ခုချိန်မှာတော့ ငွေ ၁သောင်းဟာ ဘာမှမပြောပလောက်တဲ့ အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက ဇီးထုပ်တထုပ်မှ ၁ကျပ် ငွေ ၁၀ရှိရင် ဗိုက်ကားအောင် စားလို့ရတဲ့အထိ အဖိုးတန်ခဲ့တဲ့ ၁၀တန်ဟာလဲ ခုဆို ဘယ်သူမှ မယူတော့တဲ့ပိုက်ဆံ ဖြစ်နေပါပြီ သီလရှင်ကိုတောင် လောင်းလို့မရတော့ပါဘူး တန်ဖိုးတွေလဲ လျော့ကျသွားပါပြီ
မိတ်ဆွေတို့ ကလေးနောင်ရေးအတွက် ဘဏ်မှာ တလ ၃သောင်းစီဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန်စုထားတဲ့ ငွေဟာလည်း တချိန် ငွေကြေးဖောင်းပွလာမှု ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာမှုတွေရဲ့ မိုးကြိုးပစ်မှုကို ဘဏ်မှာစုတာ အတိုးရတယ်ကွဆိုတဲ့ ထန်းလက်သေးသေးလေးနဲ့ ကာနိုင်မယ် ထင်ပါသလား?
အမှန်တကယ်က ချမ်းသာချင်ရင် ပိုက်ဆံကို သုံးရမှာပါ ငွေကို အသေမထားပဲ ငွေနဲ့ ငွေ မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ခိုင်းရပါလိမ့်မယ် ဒါမှသာ တိုးပွားမှု ရှိလာနိုင်မှာပါ ပိုက်ဆံသုံးတဲ့ နေရာမှာ ဦးနှောက်လေးပါ တွဲသုံးရင် ပိုမြန်ဆန်ပါလိမ့်မယ်
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောရရင် အဝတ်အစားတွေဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံသုံးလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူချမ်းသာဖို့အတွက် သုံးတာပါ
၂.လက်ကားဝယ်ဖို့ သုံးတာလား? ဘယ်လိုပဲ သုံးသုံးပါ
၁. လက်လီဝယ်ဖို့ သုံးမယ်ဆိုရင် လိုချင်တာလေးတွေရလို့ စိတ်ချမ်းသာပါမယ် (ဖြုန်းတယ်လို့ မပြောလိုပါဘူး အနည်းဆုံးတော့ လိုချင်တာရရင် စိတ်ချမ်းသာတတ်ကြသည် မဟုတ်လား)
၂. လက်ကားဝယ်ဖို့ သုံးမယ်ဆိုရင် ဖောက်သည်ပေးလို့ ရသလို ကိုယ်တိုင်လည်း လက်လီလက်ကား ပြန်ရောင်းနိုင်လို့ လူချမ်းသာပါမယ်
(ဒီလို ငွေသုံးခြင်းကတော့ ဦးနှောက်လေးပါ တွဲသုံးတာမျိုးပါ) သေချာပါတယ် ငွေသုံးခြင်းကသာ ကျနော်တို့ကို ချမ်းသာမှုတွေ ပေးတတ်တာပါ ကိုယ်ရောစိတ်ရော တခုမဟုတ်တခုကို ချမ်းသာစေတာပါပဲ
သူဌေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ သူတို့တွေရဲ့ဝင်ငွေတွေဟာ ငွေသုံးခြင်းကနေ စီးဝင်နေတာပါ များများသုံးလေ များများဝင်လေပါပဲ ဒီလုပ်ငန်းတခုပြီး နောက်လုပ်ငန်းတစ်ခု စသဖြင့် ထပ်ကာထပ်ကာ ငွေကို သုံးသုံးသွားကြတာပါ
ကဲဒီတော့ နောင် ၁၀နှစ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေကို ကြိုတွေးပြီး ငွေကို စုမလား သုံးမလား ဆုံးဖြတ်ကြပေါ့ဗျာ လူတိုင်း ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်ကြပါစေ။